Wuxuu dacwad ka gudbiyay sheeko lagu bahdilay madowga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Luis Lindberg oo dacwad ka gudbiyay sheeko carruureed laga bixinayay dugsi xannaanada ee ku yaala magaalada Borås. sawir: Kristin Karlsson, P4 Sjuhärad
La daabacay tisdag 5 december 2017 kl 15.06
Luis Lindberg oo magaalada Borås kaga howl-gala hoggaamiye xilliyada dhallaanku fasaxa yihiin (Fritidsledare) ayaa dacwad ka gudbiyay dusgi xannaano oo ilmo lagu dhageeysiinayey sheekadii Pippi ee qoraayaddii caanka ahayd ee Astrid Lindgren.
Sheekada dhallaanka la dhageeysiinayay Pippi Långstrump oo uu aabbaheed ahaa ”boqorka neegarrada - negerkung.
-Kolkii aan goobta shaqadayda imid waxaa goobta ku sugnaa fasal xannaanada dhallaanka. Ilmo da’doodu u dhexeeyso 2-3 sano jirro.
Buug ka mid ah sheekooyinka oo maqal ah ayaa dadka madow lagu bahdilayay iyada oo gabadha Pippi aabbaheed loo sawirayay inuu ahaa ”boqorkii neegarrada”.
Muddo iminka ay ka soo wareegtay ku dhowaad laba sannadood ayaa dib u habeeyn lagu sameeyey aflaantii Pippi Långstrump, halkaasina oo laga saaray weedhaha lagu bah-dilayey dadka madow. Hase yeeshee sheekada maqalka ah ee dhallaanku ey maqlayeen waxay ahayd kuwii hore.
–Dhallaanku waxay ku fadhiyeen fadhiga oo ey dhowr jeer maqlayeen erayga N-da ka bilowda. Qof madow ahaan waxaan dareemay meel kaga dhac iyo murugo. Miyaanan qarnigan lagu jiro sannadka 2017 aanan ahaan karin oo keliya Luis, ma inaan midab noqdaa waajib ah iyo eray wax koobaya.
Dacwadda uu gudbiyay Luis ayuu ciidanka ammaanku hoos u dhigay, maadaama uu codka sheekadii ahaa kuwii hore hase yeeshee ay iskuulka xannaanada iyo degmadu ka qaadeen xannaanada buuggii maqalka ahaa si aanay u dhicin in mar dambe dhallaanka lagu maqashiiyo. Sidoo kale waxaa dib u eegis lagu sameeyn doonaa qalabka tacliinta ee la isticmaalo.
Faqooq ma la kulantay intii aad Sweden ku sugnayd?
Ma garan karo.
Caruur cashar lagu siiyay in ay bartaan ereyga "neger"